कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणसम्बन्धी दैनिक अपडेट (वैशाख ६ गते) – इन्सेक
कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणसम्बन्धी दैनिक अपडेट (वैशाख ६ गते)
काठमाडौँ ०७७ वैशाख ६ गते
पीसीआर विधिबाट ८ हजार १७ र आरडीटी विधिबाट १९ हजार ४ सय ५४ जनाको कोरोना परीक्षण गरिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटाले नियमित पत्रकार सम्मेलनमा देशभरी ४ हजार ५ सय ३६ जना क्वारेन्टाइन र १ सय १७ जना आइसोलेशनमा रहेको बताउनु भयो । डा. देवकोटाका अनुसार हाल देशका ७७ ओटै जिल्लामा कोरोना भाइरसको परीक्षण सुरू भइसकेको छ । नेपालमा कोरोना भाइरस सङ्क्रमितको सङ्ख्या ३१ पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ । वैशाख ६ गते उदयपुरमा थप एक जना पुरुषमा कोरोना सङ्क्रण देखिएपछि सङ्क्रमितको सङ्ख्या ३१ पुगेको हो । तीमध्ये तीन जना निको भएर घर फर्किएको मन्त्रालयले जनाएको छ । थानकोटमा रोकिएका काठमाडौँ बाहिरका करिब ३ सय जनालाई वैशाख ६ गते बस चढाएर गन्तव्यतर्फ पठाइएको छ । पहिलो चरणमा बाँके, बर्दिया, दाङ, बुटवल, सल्यान र सुर्खेत पठाइएको समाचारहरूमा जनाइएको छ ।
कोशी अस्पताल कोभिड- १९ कोरोना उपचार केन्द्रमा १२ जना कोरोना सङ्क्रमित भर्ना भएका छन् । कोरोना सङ्क्रमित ती बिरामीहरूलाई उदयपुरबाट वैशाख ५ गते एम्बुलेन्सबाट विराटनगर ल्याइएको हो । प्रदेश १ मा वैशाख ६ गतेसम्म ६८ जना महिला र ३ सय ३ जना पुरुषसहित ३ सय ७१ जनाको स्वाब परीक्षण गरिएको छ । स्वाब परीक्षण गरिएकामध्ये १२ जना पुरुषको रिपोर्ट पोजेटिभ आएको छ । वैशाख ६ गते थप एक जनामा कोरोना पोजेटिभ देखिएको छ । ५७ जना महिला र २ सय ८६ पुरुष गरी ३ सय ४३ जनाको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको छ । २८ जनाको रिपोर्ट आउन बाँकी रहेको छ । वैशाख ६ गतेसम्म प्रदेश १ मा ६२ जना महिला र ५ सय ४४ पुरुषसहित ६ सय ६ जनालाई क्वारेन्टाइनमा राखिएको छ । क्वारेन्टाइनमा बसेका चार जना महिला र १६ जना पुरुष गरी २० जना डिस्चार्ज भएका छन् । होम क्वारेन्टाइनमा ४ हजार ९४ जना बसेका छन् । प्रदेशभरी ६ सय ९० जना महिला र ३ हजार ४ सय ४ जना पुरुष होम क्वारेन्टाइनमा बसेको प्रदेश १ मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ । प्रदेश १ मा वैशाख ६ गतेसम्म २ सय १० जना महिला र १ हजार ३ सय १६ पुरुष गरी १ हजार ५ सय २६ जनाको र्‍यापीड डायग्नोष्टिक टेष्ट (आरडिटी) गरिएको छ । तीन जनाको रिपोर्ट पोजेटिभ आएको छ । १ हजार ५ सय २३ जनाको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको छ । प्रदेश १ मा वैशाख ६ गतेसम्म ६ सय ८३ थान व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई) वितरण गरिएको छ ।
प्रदेश १ को भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयमा सामाजिक विकास मन्त्री जीवन घिमिरेको अग्रसरतामा वैशाख ६ गते भएको बैठकले मोरङको कटहरीमा उत्पादित तरकारी तत्काल उठाउने निर्णय गरेको छ । सामाजिक विकास मन्त्री घिमिरे, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी राज्यमन्त्री राम राना, सरोकारवाला व्यक्तिहरूको उपस्थितिमा बसेको बैठकले तत्काल तरकारी उठाउने निर्णय गरेको हो । लकडाउनका कारण किसानहरूले उत्पादन गरेको तरकारी बजारमा लैजान नपाउँदा बारीमै कुहिन थालेको गुनासो आएपछि प्रदेश सरकारको समन्वयमा तरकारी सहकारी संस्थाले सङ्कलन गरी कटहरीको तरकारी तथा फलफूल बजारमा जम्मा गरिने भएको छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाको रोहवरमा चिया उत्पादक सङ्घ र चिया मजदुर प्रतिनिधिबीच वैशाख ७ गतेदेखि बगान र कारखाना सञ्चालन गर्ने सहमति भएको छ । कामदारहरूलाई मास्क, हातधुन साबुन पानी, सामाजिक दूरी कायम गराएर सुरक्षित तवरबाट काम सुचारु गर्ने सहमति भएको छ ।
सुनसरी जिल्ला प्रशासनले वैशाख ६ गतेदेखि ८ गतेसम्म अघोषित कर्फ्यू सरह सर्वसाधारणहरूलाई घरबाहिर ननिस्कन र बजार/पसलमा नखोल्न माइकिङ्ग गरी आहृवान गरेको छ ।
प्रदेश २ मा वैशाख ६ गते दिउँसोसम्म कोरोना भाइरसका शङ्कास्पद ५ सय ५१ जनाको स्वाब परीक्षण गरिएकोमा ५ सय १२ जनाको रिपोर्ट निगेटिभ आएको छ । ३५ जनाको रिपोर्ट आउन बाँकी रहेको छ । चार जनाको रिपोर्ट यसअघि नै पोजेटिभ आइसकेको छ । पोजेटिभ रिपोर्ट आएका चार जनाको पर्साको बीरगञ्जस्थित नारायणी अस्पतालको आइसोलेशन वार्डमा उपचार भइरहेको छ ।
त्यसैगरी, वैशाख ६ गतेसम्म आरडीटी किटबाट परीक्षण गरिएका १ हजार ८ सय २२ जनाको स्याम्पल सङ्कलनमा १ हजार ८ सय १९ जनाको रिपोर्ट निगेटिभ आएको छ भने सप्तरी जिल्लामा गरिएको परीक्षणमा दुई र सर्लाही जिल्लामा गरिएको परीक्षण एक जना गरी तीन जनाको रिपोर्ट पोजेटिभ देखिएको छ । सप्तरीका दुई जनामा कोरोना सङ्क्रमण पोजेटिभ देखिएपनि पिसीआर प्रविधिबाट गरिएको स्वाब परीक्षण रिपोर्टमा भने नेगेटिभ देखिएको छ । सर्लाहीमा पोजेटिभ रिपोर्ट आएका ती युवाको स्वाब परीक्षणका लागि जनकपुर अस्पताल पठाइएको सर्लाहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मोहनबहादुर जिसीले बताउनु भएको छ ।
प्रदेश २ भरिका १ सय ७१ ओटा क्वारेन्टाइनको बेड क्षमता ३ हजार ६ सय ९ रहेको छ । हालसम्म १ हजार २ सय ६५ जना क्वारेन्टाइनमा रहेका छन् भने १ हजार ६ सय ७७ जना होम क्वारेण्टाइनमा रहेको स्वास्थ्य निर्देशनालयका प्रमुख डा. हरिशचन्द्र यादवले जानकारी दिनु भयो ।
कोरोना भाइरस रोकथामका लागि प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले गरेका कार्यबारे प्रदेश स्तरीय सर्वदलीय अनुगमन समितिले वैशाख ६ गतेदेखि अनुगमन थालेको छ । अनुगमन टोलीले प्रदेश भरिका सबै जिल्लाका स्थानीय तहमा अनुगमन गर्नेछ । टोलीमा समाजवादी पार्टीका प्रदेश सांसद तथा प्रमुख सचेतक शैलेन्द्र यादव, राजपाका सांसद तथा प्रमुख सचेतक प्रमेश्वर साह, नेकपाका सांसद रामचन्द्र मण्डल, नेपाली कांग्रेसका सांसद तथा प्रमुख सचेतक रामसरोज यादवसहित चिकित्सक रहेका छन् । टोलीले प्रदेशस्तर, जिल्लास्तर र स्थानीय तहमा सञ्चालित क्वारेन्टाइन, आइसोलेशन, कोरोना विशेष अस्पतालहरूमा भएका काम कारबाही, राहत वितरण कार्य, नागरिकको जनजीवनमा परेको प्रभाव बारे अनुगमन गर्ने जनाइएको छ । अनुगमन पश्चात् प्रदेश सरकारलाई सुझाव दिइने अनुगमन समितिका सदस्य शैलेन्द्र यादवले बताउनु भयो ।
प्रदेश २ सरकारले नेपाल भारत सीमा-नाका लकडाउनका कारण शिल गरिएको अवस्थामा पनि आवागमन नरोकिएपछि आठ ओटै जिल्लाका विभिन्न नाकामा सिसिटिभी जडान गर्ने भएको छ । प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुन राज्यमन्त्री सरोज सिंह कुशवाहाले सो जानकारी गराउँदै भन्नुभयो, 'नेपाल भारत सीमा नाकामा सिसिटिभी क्यामेरा जडानका लागि करिब ५ करोड रूपैयाँ खर्च हुने छ । सीमामा कडा निगरानीका लागि यो कदम उठाउन लागिएको हो ।' भारतसँग जोडिएको खुला सीमाका कारण भारतबाट रातिको समयमा लुकिछिपी मानिसहरू नेपाल छिर्ने गरेको र त्यसले गर्दा कोरोना सङ्क्रमण रोकथाममा झन कठिनाइ भएको भन्दै सिसिटिभी क्यामेरा अर्को विकल्पको रूपमा अघि सारिएको बताउनु भयो । यस्तै, सीमानाकामा निगरानी बढाउनका लागि सुरक्षाकर्मीलाई १ सय थान साइकल दिने तयारीमा समेत प्रदेश सरकार जुटेको मन्त्री कुशवाहाले बताउनु भयो ।
पर्साको बीरगञ्ज महानगरपालिकाले सुविधा सम्पन्न कोभिड- १९ अस्पताल सञ्चालनमा ल्याउन वैशाख ६ गते बीरगञ्जको गण्डक अस्पतालसँग सम्झौता गरेको छ । बीरगञ्ज महानगरपालिकाका प्रमुख विजय कुमार सरावगी र नेकपा महानगर कमिटीका अध्यक्ष एवम् गण्डक अस्पतालका सञ्चालक रहवर अन्सारीलाई साक्षी राखेर सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । सम्झौताको अवधि तीन महिनाको रहने उल्लेख छ ।
प्रदेश २ का जिल्लाहरूमा वैशाख ५ गते राति आएको हावाहुरी र असिना पानीले मकै बाली, तरकारी बाली, उखु बालीमा क्षति पुर्‍याउनुका साथै कतिपय व्यक्तिहरूको घरका छानामा समेत क्षति पुगेको छ ।
कोरोना सङ्क्रमण देखिएकी नेपालकी दोस्रो सङ्क्रमित १९ वर्षीया युवती अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएकी छन् । वैशाख ६ गतेको रिपोर्ट पनि नेगेटिभ आएकाले डिस्चार्ज गरिएको सरुवा रोग अस्पताल, टेकुका प्रवक्ता डाक्टर अनुप बास्तोलाले बताउनुभयो । काठमाडौँकी ती युवती चैत ४ गते फ्रान्सबाट कतारको दोहा हुँदै काठमाडौँ आएकी थिइन् ।
चितवनमा कोरोना भाइरस सङ्क्रमण पुष्टि भएकाहरूको सम्पर्कमा रहेकाहरूको ट्रेसिङ सुरू गरिएको छ । ६३ वर्षीया महिला र २७ वर्षीय पुरुषको कोरोना परीक्षणको तेस्रो पटकको रिपोर्ट पनि पोजेटिभ देखिएपछि वैशाख ५ गते कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि गरिएको थियो । उनीहरू चैत ३ गते कतार एयरवेजमार्फत बेलायतबाट नेपाल आएका थिए ।
कोभिड-१९ को सङ्क्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्नका लागि चालिएका विभिन्न गतिविधिसहित आम नगरबासीहरुलाई सुसूचित गर्ने उद्देश्यले हेटौँडा उपमहानगरपालिकाले अधिकारिक पोर्टल तयार पारेको छ । https://hetauda.sasan.org/covid19 पोर्टल तयार पारिएको उपमहानगरपालिकाले जनाको छ । बागमती प्रदेश अन्तर्गतका जिल्लाहरूमा राहत वितरण तथा कोरोना परीक्षणका गतिविधि वैशाख ६ गते पनि जारी राखिएको छ ।
बागलुङकी ६५ वर्षीया कोरोना सङ्क्रमित महिलाको चौथो पटकको रिपोर्ट नेगेटिभ आएपछि डिस्चार्ज गरिएको छ । चैत ४ गते बेल्जियमबाट कतार हुँदै बागलुङ आएकी महिलालाई चैत १७ गते कोरोना सङ्क्रमण भएको पुष्टी भएको थियो । कोरोना सङ्क्रमण भएको पुष्टी भएपछि धौलागिरी अञ्चल अस्पताल बागलुङको आइसोलेशन वार्डमा उपचाररत महिलाको यसभन्दा पहिले दुई पटक स्वाब परीक्षण गर्दा पोजेटिभ आएपनि तेस्रो र चौथौ पटक नेगेटिभ रिपोर्ट आएको स्वास्थ्य कार्यालय बागलुङका प्रमुख सुरज गुरौले जानकारी दिनुभयो । डिस्चार्ज गरिए पनि उहाँलाई केही समय होम क्वारेण्टाइनमा राखिने धौलागिरी अञ्चल अस्पताल बागलुङका निमित्त मेडिकल सुपरिटेण्डेण्ट डाक्टर शैलेन्द्र वि. पोख्रेलले जानकारी दिनुभयो ।
तनहुँ जिल्लामा जिल्ला बाहेक बाहिर उत्पादित तरकारीको आयातमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ । व्यास नगरपालिकाको समन्वयमा कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार जिल्लास्तरीय समन्वय समिति सहितको बैठकमा मित्र राष्ट्र भारत र चिन सहित नेपालकै अन्य बाहिरी जिल्लाबाट भित्र्याइने तरकारी र फलफुलको आयातमा पुर्ण प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय भएको व्यास नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दिनेशराज पन्तले बताउनु भयो । गण्डकी प्रदेश अन्तर्गतका जिल्लाहरूमा राहत वितरण तथा कोरोना परीक्षणका गतिविधि वैशाख ६ गते पनि जारी राखिएको छ ।
प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलले कोरोना रोग परीक्षणको लागि भैरहवा, दाङ र नेपालगञ्जमा स्थापना गरिएका प्रयोगशाला तत्काल सञ्चालन गर्न निर्देशन दिनु भएको छ । उहाँले कामको गति बढाएर आपसी समन्वय गर्दै परिणाममुखी नतिजा निकाल्नुपर्ने बेला आएको बताउनु भयो । यसैगरी मुख्य मन्त्री पोखरेलले विश्वमा महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणमा भइरहेका प्रयास र आगामी दिनमा गर्नुपर्ने कामका विषमा दाङस्थित राजनितिक दलका नेता, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख र नागरिक समाजका अगुवाहरूसँंग एकीकृत भिडियो सम्वाद गर्नु भएको छ ।
कपिलवस्तुको सिमा क्षेत्रबाट लुकेर नेपाल भित्रिन नदिन सिमा नाकाहरूमा २४ घण्टा सुरक्षाकर्मीहरू खटिएका छन् । यसैगरी बाणगङ्गा, नपाको बनगाइर्, बुद्धभूमि , गोरुसिङ्गे र शिवराज नपाले राजमार्गमा रहेका पैदल यात्रीहरूलाई खाना, खाजा र पानीको व्यवस्था गरेका छन् । बाँकेको नेपालगञ्ज मेडिकल कलेजको आइसोलेशनमा उपचाररत बर्दिया जिल्ला गुलरियाका ४५ वर्षीय इसराइल बेहनाको वैशाख ६ गते मृत्यु भएको छ । दमका बिरामी रहेका बेहनालाई वैशाख ४ गतेदेखि नेपालगञ्ज मेडिकल कलेजको आइसियुमा राखेर उपचार गराइएको थियो । मृतकको स्वाब परीक्षणका लागि काठमाडौँ पठाउने तयारी भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यलयका एसपी वीरबहादुर वलीले बताउनु भयो ।
नेपाल खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडको ढुवानी अनुदानमा पैदल मार्गबाट हुम्लाका दुई ओटा डिपोका लागि आएको खाद्यान्न वैशाख ४ गतेदेखि मुगुको छायाँनाथ नगरपालिका-१४ मा रोकिएको छ । सो वडाका अध्यक्ष नन्दबहादुर बढुवालको निर्देशनमा छायाँनाथ नगरपालिका-१४ को बाम गाउँमा रोकिएको खबर खाद्यान्न ढुवानीको जिम्मा पाएको सप्लायर्सका प्रतिनिधि बीरबहादुर बुढाले बताउनु भयो । त्यसैगरी, सदरमुकाम सिमकोटदेखि ४५ कोस टाढा रहेको बाजुराको सिमानासँग जोडिएको ताजाँकोट गाउँपालिकामा खाद्य सङ्कट भएको छ । चालू आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को स्वीकृत ८ सय क्वीन्टल कोटामध्ये १ सय ८५ क्वीन्टल चामल मात्रै आएको र विक्री केन्द्रमा पुगेको ताजाँकोट गाउँपालिका अध्यक्ष बाग्दल मल्लले जानकारी दिनु भयो । छप्रेला बिक्री केन्द्रमा चामल नै नआएपछि हाल खाद्य सङ्कट भएको उहाँको भनाइ छ ।
कोरोना भाइरस सङ्क्रमण रोकथामका लागि सरकारले गरेको लकडाउन कार्यान्वयन प्रक्रिया, विपन्न वर्गको जीवनयापन समस्या, राहत सहयोग, प्रेस स्वतन्त्रता, नागरिक अधिकार, सरकारका प्रवाहलगायतका विषयमा अनुगमन गर्न वैशाख ६ गते बसेको पहिलो बैठकले जिल्लास्तरीय मानव अधिकार अनुगमन समिति दैलेखको सदस्यमा इन्सेक जिल्ला प्रतिनिधि अमर सुनारलाई मनोनित गरिएको छ । मानव अधिकार राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले कोभिड-१९ सम्बन्धमा जारी गरेको मानव अधिकार अवस्था अनुगमन नेटवर्क कार्यविधिमा भएको व्यवस्थाअनुसार जिल्लामा बढीमा दुई जना सदस्य मनोनित गर्न सकिने प्रावधान अनुसार मनोनित गरिएको हो ।
भारतीय सीमा क्षेत्रमा क्वारेण्टाइनमा बसेका नेपाली मजदुरहरूले सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन गरेर आफूहरूलाई स्वदेश फर्काउन सबैले सहयोग गर्नुपर्ने बताएका छन् । भारतीय क्वारेन्टाइनमा बसोबासका लागि निकै समस्या भएकाले आफूहरूलाई स्वदेश फर्काइ स्वदेशकै क्वारेण्टाइनमा राख्न उनीहरूले आग्रह गरेका छन् । एकै कोठामा धेरै मानिस सुत्नु पर्ने भएकाले विभिन्न रोगको जोखिम रहेको नेपाली मजदुर दीर्घराज जोशीले बताउनु भयो । कैलाली र कञ्चनपुर जिल्लामा कोरोना सङ्क्रमितको उपचारका लागि ५०/५० शैयाको कोरोना अस्पतालको निर्माण गर्ने सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको घोषणाअनुसार धनगढीमा निर्माण कार्य सुरू भएको छ । सुदूरपश्चिमको सामाजिक विकास मन्त्रालयले स्वास्थ्य कार्यालय, कैलाली र महाकाली अस्पताललाई ५०/५० शैयाको अस्पताल निर्माणका लागि १/१ करोड रुपियाँ अख्तियारी दिए अनुरूप धनगढीमा कोरोना अस्पताल निर्माण सुरु गरिएको छ भने कञ्चनपुर जिल्लाको महेन्द्रनगरमा प्रक्रियामा रहेको छ ।
कोरोना भाइरसको सम्भावित सङ्क्रमणको परीक्षण र उपचारका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले ६ जना चिकित्सकको टोली अछाम जिल्ला पठाएको छ । टोलीमा डा. शरदचन्द्र बराल, अर्थोपेडिक डाक्टर मोहननाथ र क्षितिज सापकोटा, गाइनोकोलोजिस्ट डा. धर्मराज रेग्मी, रेडियोलोजिष्ट डा. मिलन सिलवाल र डा. विष्णु खतिवडा रहनुभएको छ । मन्त्रलायबाट खटिएका चिकित्सकले करिब एक महिना जिल्लामा रहेर काम गर्ने गरी वैशाख ७ गते पुग्ने जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय अछामका प्रमुख झनकराज ढुङ्गानाले जानकारी दिनु भयो । सरकारले अछाम अस्पताललाई कोरोना विशेष अस्पतालका रूपमा तोकेको छ । कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि महाकाली अस्पतालले भेण्टिलेटरसहितका उपकरणमा बदमासी गरेको भन्ने समाचार बाहिरिएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानविन सुरु गरेको छ । आयोगले अस्पताल प्रशासनबाट खरिदसम्बन्धी कागजातहरू नियन्त्रणमा लिएको छ । अस्पतालको भेन्टिलेटर खरिद प्रक्रियामा अनियमितता गरेको समाचार बाहिरिएपछि अख्तियारले चासो दिएको अख्तियारको कञ्चनपुर कार्यालयका प्रवक्ता टोपबहादुर विष्टले बताउनु भयो ।
नेपाल सरकारद्वारा जारी गरिएको लकडाउनका क्रममा मानव अधिकारको अवस्था अनुगमन गर्न राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको कार्यविधि अनुसार अछाममा पाँच सदस्यीय जिल्लास्तरीय मानव अधिकार अनुगमन समिति वैशाख ६ गते निर्माण गरिएको छ । समितिको सदस्यमा अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) का जिल्ला प्रतिनिधि शिवराज ढुङ्गाना चयन हुनुभएको छ ।